UNhleko uchitha eyesikhundla | IOL Isolezwe
UNhleko uchitha eyesikhundla
Isolezwe / 11 June 2012, 1:55pm /
Mnuz Nkosinathi Nhleko
UMQONDISI Jikelele emnyangweni wezaBasebenzi, uMnuz Nkosinathi Nhleko, okuthiwa angase angene esikhundleni sokuba nguMkhuzi wamaPhoyisa njengoba kuthiwa usekhonjwe indlela uGeneral Bheki Cele, kusolwa ukuthi akanawo ngisho noMatric kodwa wakwazi ukuguqula lo mnyango ngonyaka owodwa nje vo eqokiwe.
UNhleko (osesithombeni) nguyena muntu obhekiwe ukuthi athathe izintambo njengoba kuthiwa uCele usayithola nencwadi emkhomba indlela kodwa ihhovisi likaMengameli lithi isimemezelo sizokwenziwa uma uMengameli Jacob Zuma eselandele yonke imigudu efanele.
Imithombo engaphakathi emaphoyiseni itshele inkampani eshicilela Isolezwe namanye amaphephandana, i-Independent Newspapers, ukuthi kukhona abangahambisani nokuqokwa kukaNhleko noma umuntu wangaphandle ukuthi azophatha amaphoyisa njengoba kukhona asemnkantshubomvu.
UNhleko uyakuchitha ukuthi uzongena kulesi sikhundla kodwa imithombo iyakuqinisekisa ukuthi useke wahlolwa ukuthi uwulungele yini lo msebenzi.
Okhulumela umnyango wezabaSebenzi, uMnuz Musa Zondi, uphikile ukuthi uNhleko uzoyiswa kwesikaKhomishana wathi yinzwabethi nje.
Yize ishayisa amakhala eyokuthi akanawo ngisho uMatric uNhleko kodwa uZondi uthe unaneziqu zeLabour Law azithola eGraduate Institute of Management Technologies.
“Usanda kuphothula iziqu zeMasters kwezokuphatha eNyuvesi yaseLeeds. Lo mnyango wanconywa ngokusebenzisa kahle imali okokuqala ngqa selokhu athatha izintambo,” kusho uZondi.
UNhleko, owaziwa njengosondelene noZuma, unomlando omude noZuma. Ngo-2005 waba ngomunye wabakhulumela uZuma engqungqutheleni iNational General Council ngesikhathi exoshwe nguThabo Mbeki.
Useke waba yilungu le-Judicial Service Commission, nguSihlalo weKhokhasi ye-ANC, nguKhomishana emnyangweni wezokuHlunyeleliswa kwezimilo, yiPhini lemenenja kamasipala kumasipala waseMhlathuze, yiNhloko ebhekele inkohlakalo emnyangweni wezisebenzi zikahulumeni nokuphatha.
Waqala ngokuba yisishoshovu elwela abasebenzi enyunyaneni iTransport and General Workers’ Union engunobhala jikelele.
Ngo-1994 waya ePhalemende kwaze kwaba ngu-2005 kanti ngo-2002 waqokwa ukuba nguSotswebhu we-ANC kodwa wasuswa ngo-2004 kwangena uMbulelo Goniwe.
“Abantu bayaziqagelela nje. Ngiyavuma ukuthi kunamahlebezi nokuqagela kodwa okungasho ukuthi yonke le nto iyiqiniso. Eminyakeni engu-25 sengisebenze ukuphatha abantu futhi kuningi engikuzuzile,” kusho uNhleko.